चीनले सित्तैमा दिएको तेल आयो तर जनतालाइ सित्तैमा दिने कि नेता,दलाली र कालाबजारीमार्फत लुट्ने? ~ Khabardari.com
चीनले सित्तैमा दिएको तेल आयो तर जनतालाइ सित्तैमा दिने कि नेता,दलाली र कालाबजारीमार्फत लुट्ने?
सरकारलाई अनुदानको पेट्रोल चीन सरकारले दिएकोछ यो अनुदान हिनामिना हुने र व्यापक दुरुपयोग हुने देखिएको छ । पक्कैपनि कार्यकर्ता , आसेपासे र सरकारी गाडी कुदाउन हैन नेपाली जनताको नाममा आएको अनुदान पेट्रोल जनताले सित्तैमा नभनम तर ढुवानी लागत् र आवस्यक राजस्व असुली गरि वितरण होस् ।
सरकारी हाकिमहरु र सरकार समर्थित दलका कार्यकर्ताहरु यो अनुदानको तेलमा गिद्दे दृस्टी राख्दै व्यापक दुरुपयोग हुने सम्भावना भएकोले सबैले खबरदारी गरौ ।
चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोलियम पदार्थ बुधबार मात्रै २६ ट्यांकर भित्रिएको छ । ती ट्यांकरबाट नेपाल आयल निगमले २ लाख ७० हजार ६६ लिटर नेपाल भित्र्याएको यससँगै अब ३ लाख ७४ हजार ३ लिटर पेट्रोल चीनको केरुङबाट ल्याउन बाँकी छ । चीनले अनुदानमा दिएको एक हजार मेट्रिकटन पेट्रोलियम पदार्थ दिने घोषणा गरेको थियो । आइतबार एक दिनमै २७ वटा ट्यांकरले २ लाख ४८ हजार लिटर रसुवागढी नाकाबाट भित्र्याएका थिए । हालसम्म जम्मा ९७ वटा ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ ओसारिसकेका छन् । नेपाली ट्यांकरले चिनीयाँ दूतावासबाट चालक, सहचालक र ट्यांकर नम्बर चीनको केरुङ छिर्ने अनुमति दिएपछि ती ट्यांकरले नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएका हुन् । ल्याइएका पेट्रोलियम पदार्थ युरो स्ट्यान्र्ड चार रहेको आयल निगमले जनाएको छ । तिहारपछि निगमले एकै लटमा सबै इन्धन नेपाल भित्र्याउने छ ।